तपाईंको लाइभ भिडियोहरूको लागि--पोइन्ट प्रकाश कसरी सेट अप गर्ने Martech Zone
हामी हाम्रो ग्राहकलाई प्रयोगको लागि केहि फेसबुक लाइभ भिडियोहरू गरिरहेछौं स्विचर स्टुडियो र बिल्कुल माया मल्टि-भिडियो स्ट्रिमिंग प्लेटफर्म। एउटा क्षेत्र जुन मैले सुधार गर्न चाहेको थिए त्यो हाम्रो प्रकाश थियो। जब म यी रणनीतिहरूको कुरा गर्दछु म एक भिडियो भर्खरको सानो हुँ, त्यसैले म प्रतिक्रिया र परीक्षणको आधारमा यी नोटहरू अपडेट गर्न जारी राख्छु। म मेरो वरिपरिका पेशेवरहरूबाट पनि एक टन सिक्दै छु - जसमध्ये केही मैले यहाँ साझेदारी गर्दैछु! त्यहाँ एक विशाल संसाधन अनलाइन छ।
हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा १ 16-फुट छत छतमा अविश्वसनीय चमकदार एलईडी बाढी बत्ती सहितको छ। यसले भयानक छायाहरूमा परिणाम दिन्छ (सिधा तल औंल्याउँदै) ... त्यसैले मैले हाम्रो भिडियोग्राफर, AJ का साथ परामर्श लिए Ablog सिनेमा, एक सस्तो, पोर्टेबल समाधानको साथ आउन।
ए जे मलाई 3-पोइन्ट प्रकाशको बारेमा सिकाउँथ्यो र म प्रकाशको बारेमा कति गलत छु भनेर म स्तब्ध भएँ। मैले सधैं सोचेको उत्तम समाधान क्यामेरामा माउन्ट गरिएको एलईडी लाइट हुनेछ जसलाई हामी साक्षात्कार गर्दै थियौं। गलत। विषयको अगाडि सीधा प्रकाशको साथ समस्या यो हो कि यसले वास्तवमा अनुहारको आयामहरू धोइदिन्छ उनीहरूको प्रशंसा गर्नुको सट्टा।
--पोइन्ट प्रकाश भनेको के हो?
--पोइन्ट प्रकाशको लक्ष्य भनेको भिडियोमा विषय (हरू) को आयाम हाइलाइट र एक्सेंट गर्नु हो। विषयको वरिपरि रणनीतिक रूपमा लाइटहरू राखेर, प्रत्येक स्रोतले विषयको एक अलग आयाम प्रबुद्ध गर्दछ र अधिक उचाइ, चौडाई, र गहिराईको साथ एक भिडियो सिर्जना गर्दछ ... जबकि सबै भद्दा छायाहरू हटाउँदा।
थ्री-पोइन्ट लाइटिंग भिडियोमा उत्कृष्ट प्रकाश प्रदान गर्न सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने टेक्निक हो।
--पोइन्ट प्रकाशमा तीन लाइटहरू हुन्:
कुञ्जी प्रकाश - यो प्राथमिक प्रकाश हो र सामान्यतया क्यामेराको दायाँ वा बायाँ अवस्थित हुन्छ, यसबाट ° 45 °, यस विषयको 45 XNUMX ° तल देखाउँदै। यदि छायाँ कडा छ भने डिफ्यूजरको प्रयोग आवश्यक छ। यदि तपाईं उज्यालो प्रकाशमा बाहिर हुनुहुन्छ भने, तपाईं सूर्यलाई तपाईंको कुञ्जी प्रकाशको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
लाइट भर्नुहोस् - भर्ने प्रकाश विषयमा चम्किन्छ तर कुञ्जी कोणबाट कुञ्जी प्रकाश द्वारा उत्पादित छाया कम गर्न। यो सामान्यतया विसरित हुन्छ र कुञ्जी प्रकाशको झन्डै आधा चमक। यदि तपाइँको प्रकाश धेरै उज्यालो छ र अधिक छाया को उत्पादन, तपाईं प्रकाश नरम गर्न एक परावर्तक को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ - परावर्तक मा भरण प्रकाश पोइन्टिंग र विषय मा फैलाएको प्रकाश प्रतिबिम्बित।
पछाडि लाइट - रिम, कपाल, वा काँधको प्रकाशको रूपमा पनि चिनिन्छ, यो प्रकाश पछाडिबाट विषयमा चम्किन्छ, पृष्ठभूमिबाट विषय छुट्याउँदै। केहि व्यक्तिले छेउमा यसलाई कपाल बढाउनको लागि प्रयोग गर्दछन् (जसलाई चिनिन्छ kicker)। धेरै भिडियोग्राफरहरूaप्रयोग गर्छन् एकाधिकार त्यो अत्यधिक विसरित ओवरहेडको सट्टा सीधा केन्द्रित हुन्छ।
निश्चित गर्नुहोस् तपाईंको विषय र पृष्ठभूमि बीच केही दूरी छोड्नुहोस् ताकि तपाईंको दर्शकहरू तपाईंको वरपर भन्दा तपाईंको ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्।
3-पोइन्ट प्रकाश स्थापना कसरी गर्ने
यहाँ एक शानदार, जानकारीपूर्ण भिडियो छ कसरी सही तरिकाले--पोइन्ट प्रकाश स्थापना गर्न को लागी।
सिफारिश गरिएको प्रकाश, रंग तापमान, र डिफ्यूजरहरू
मेरो वीडियोग्राफरको सिफारिशमा, मैले अल्ट्रा पोर्टेबल खरीद गरें अपुचर अमरान एलईडी बत्ती र3को शीत विसारक किटहरू। बत्तीहरू दुई ब्याट्री प्याकको साथ सीधै संचालित गर्न सकिन्छ वा साथको साथ आपूर्ति आपूर्तिको साथ प्लग इन गर्न सकिन्छ। हामीले पा whe्ग्राहरू पनि खरीद्यौं ताकि हामी तिनीहरूलाई सजिलैसँग कार्यालयको वरिपरि रोल गर्न सक्दछौं।
यी बत्तीहरूले र color तापक्रम समायोजन गर्न क्षमता प्रदान गर्दछ। धेरै नयाँ भिडियोोग्राफरहरूले गर्ने गल्ती मध्ये एक हो कि उनीहरूले र color्गको तापक्रम मिलाउँछन्। यदि तपाईं प्रज्ज्वलित कोठामा हुनुहुन्छ भने, तपाईं त्यहाँ कुनै पनि बत्तीहरू बन्द गर्न चाहानुहुन्छ र color्ग तापमानको टकरावबाट बच्न। हामी हाम्रो ब्लाइन्डहरू बन्द गर्छौं, ओभरहेड बत्तीहरू बन्द गर्छौं, र हाम्रो एलईडी बत्तीहरू 5600 XNUMX०० केमा सेट गर्छौं एक चिसो तापमान प्रदान गर्न।
हामी हाम्रो पोडकास्टिंग तालिका माथि केहि ओभरहेड नरम भिडियो स्टुडियो प्रकाश स्थापना गर्दैछौं ताकि हामी फेसबुक लाइभ र यूट्यूब लाइभ मार्फत हाम्रो पोडकास्टको प्रत्यक्ष शटहरू गर्न सक्दछौं। यो एक निर्माण कार्यको एक बिट हो किनकि हामीले एउटा समर्थन फ्रेम पनि निर्माण गर्नुपर्दछ।
अपुचर अमरान एलईडी बत्ती फ्रस्ट विसारक किट्स
खुलासा: हामी यो पोष्टमा हाम्रो अमेजन सम्बद्ध लिंकहरू प्रयोग गरिरहेका छौं।
टैग: --पोइन्ट प्रकाश5600kभविष्यअप्रिय आमरणपछाडि प्रकाशउत्तम प्रकाश किटप्रकाश भर्नुहोस्कपालको बत्तीकुञ्जी प्रकाशkickerकिकर प्रकाशहल्का रङ्गप्रकाश परावर्तकप्रकाश सिद्धान्तप्रकाशप्रकाश किटरोशनीएकाधिकारप्रतिबिंबितस्विचर स्टुडियोभिडियो प्रकाशभिडियो प्रकाश किटभिडियो बत्तीहरू